Wareegto aan sharci ahayn | allsanaag
Wareegto aan sharci ahayn
Xildhibaanaddii Aqalka Sare ee beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli ay ka heli lahaayeen gobolada waqooyiga Soomaaliya ayaa Wareegto aan sharci ahayn laga soo saaray.
Xildhibaan Maxamed Cismaan Jawaari oo dhowaan xildhibaanimadiisa ka soo helay beeshiisa Reer Aw Midoobe ee Raxanweyn, horayma u ahaa Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda la xulayo kii bedeli lahaa ayaa soo saaray wareegto aan sharci ahayn oo ay u soo qoreen wakiiladda SNM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wareegtadan ayaa waxa lagu qoray in beelihii meelo kale ka helay Xildhibaanada Aqalka sare ayna ka heli karin Xildhibaano kale gobolada waqooyiga Soomaaliya ee “Somaliland”
Beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli ee dega waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Sool, Sanaag iyo Togdheer ayaa wareegtadan loogu dan leeyahay oo iyagu sadex Xildhibaan ka helay maamulka Puntland. Halka raali laga yahay Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe inay iyagu heleen Sideed Xildhibaan. Gobolka Galguddud iyo Nus Mudug ahna ay iyaguna heleen sideed Xildhibaan. Isugaynta guud sadex gobol iyo Nus 16 Xildhibaan
Madashii ugu danbaysay ee madaxda Soomaaliyeed ay yeesheen Go’aan lagama gaarin siddii loo qaybsan lahaa xildhibaanada waqooyiga Soomaaliya, waxaana arintaa loo xilsaaray inuu halkii ay joogtay ka sii wado Ra’isawasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Jawaari oo dano siyaasadeed arintan ka leh iyo Daarood diid ayaa magcaabay Guddi ka kooban 7 Xubnood oo ka soo wada jeeda beelaha Dirta waqooyi, kuwaas oo kala ah Jaamac Maxamed Qaalib,Xuseen Ceelaabe Faahiye, Axmed Siciid Faarax,Maxamuud Axmed Ismaacil,Ciise Ducaale Buun iyo Ibraahim Axmed Caabi
Gudigan ayaa loo magcaabay siddi ay u soo xuli lahaayeen Xildhibaano ka soo jeeda oo qura beelaha Dirta Waqooyi iyo hal Xildhibaan oo ka soo jeeda beesha Fiqi Shini ee Hawiye oo xaafad ka degta gobolka Sool.
Siyaasiyiin reer Muqdisho ah oo uu ka mid yahay Xasan Culusoow ayaa arintan aan sharciga ahayn iyaguna wax ka og . Waxayna rajo ka qabaan in tan bedelkeeda ay ku helaan inay qabtaan hogaanka Soomaaliya.
Ugu danbayntii Raisawasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo arinta qaybsiga Xildhibaanada waqooyiga Soomaaliya loo xilsaaray isagu inuu wax ka qabto ayaa laga sugayaa jawaabta uu ka bixiyo wareegtada uu soo saaray Xildhibaanka beelaha reer Aw-Madoobe
← Ontario Judge Who Wore Trump Hat To Court Must Step Down: Councillor Jordan ranked 77th on Fragile States Index →